Shirkii billaha ahaa ee Wasaaradda caafimaadka ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee wasaaradda | Puntland Ministry of Health
Shirkii billaha ahaa ee Wasaaradda caafimaadka ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee wasaaradda
Waxaa markay taariikhdu ahayd 2o-21 ka dhacay hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka Puntland shirkii billaha ahaa kaas oo bishiiba mar la qabto lagagana hadlo waxqabadka wasaaradda. Waxaa kaloo shirka lagu soo bandhigayey waxqabadkii 2016 ee waaxyaha wasaaradda caafimaadka Dowlad Gobollleedka Puntland. Waxaa shirka furay wasiirka wasaaradda caafimaadka Cabdinaasir Cismaan Ciise (Cuuke). Furitaanka kadib waxaa wasiirka aad ugu mahadceliyey shaqaalaha wasaaradda caafimaadka isagoo sheegay in shaqaalaha wasaaraddu yihiin dad isku xidhan isla markaana yihiin shaqaale heegan u ah ummadooda. Waxaa kaloo wasiirku meesha ka sheegay ammaanta Madaxweynaha Puntland Cabdiweli ee ku aadan shaqada fiican ee wasaaraddu qabato.
Waxaa kaloo isna goobta ka hadlay Agaasimaha wasaaradda caafimaadka oo isna u mahadceliey shaqaalaha wasaaradda shaqada fiican ee ay hayaan loona baahan yahay in lasii dardar geliyo.
Waxaa sidoo kale abaalmarino la guddoonsiiyey dadkii ugu isticmaalka badnaa mashiinka xaadirinta ee shaqaalaha joogistooda shaqada lagua socdo taas oo ay soo bandhigeen waaxda shaqada iyo shaqaaluhu.
Waxaa kaloo iyana shirka ka sooo baxay in wasaaraddu ka qayb qaadato gurmadka abaaraha iyadoo awalba wasaaraddu ku jirtey hadana in si shakhsi ah looga qayb qaato qof waliba la baxo wixii uu awoodo taas oo loo saaray Guddi.